Madaxweyne farmajo Oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomey Safiiro Cusub. – Kismaayo24 News Agency
Madaxweyne farmajo Oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomey Safiiro Cusub.
by admin 11th April 2019 015
Algeria: Shacabka Dalka Aljeeriya oo diidan Madaxweynaha Kumeel-gaarka ah.
Ciidanka Amniga Magaalada Muqdisho oo soo gacanta kudhigay Hub farabadan.
WAR CUSUB: Nin loo heysto in uu bixiyay Xogaha Dhanka Sirdoonka Wadamada Ethopia iyo kenya oo …
Akhriso: Mooshinka laga keenay Golaha Wasiirada Jubbaland oo Cirka isku shareeray Meeqa Xildhibaan ayaa saxiixday?
Dhagayso Barnamijka Xulka Waraysiyada Radio VOS oo caawa xiiso gooni ah leh
admin 9th August 2015 27th August 2015